Golis oo si wayn uga qayb qaadatay Maalinta saxaafadda Soomaaliyeed | Golis Telecom Somalia
Golis oo si wayn uga qayb qaadatay Maalinta saxaafadda Soomaaliyeed
Munaasabad balaadhan oo lagu qabtay magaaladda Boosaaso ayaa waxaa soo qaban qaabiyay saxafiyiinta gobalka Bari islamarkaana waxaa lagu xusayay 43sano guuradii kasoo wareegatay maalintii loo aqoonsaday maalinta saxaafadda Soomaaliyeed.
Shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Somalia ayaa kaalin mug leh ka qaadatay munaasabada 21-Janoury oo ah maalinta saxaafadda Soomaaliyeed iyadoo hadiyaddo qaali ah gudoonsiisay wariyayaasha kuwaas oo ay ugala qayb qaadanasay dareenka farxadeed eek u wajahan maalintan qiimaha u leh saxaafadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan afka Soomaaliga.
Hadiyadiaha ay shirkaddu xafladda gaysay oo lagu helayay hab bakhtiyaa nasiib ah ayaa ahaa kuwo ay inta badan adeegsadaan wariyayaashu xiliyada ay ku jiraan hawlohooda warbaahineed waxana kamid ahaa Laptop Computer, Digital Camera, Flash disks, Hard Disks, Dhar labis qurxoon oo rag iyo dumar ah iyo hadiyado kale.
Madaxa Suuqgaynta shirkadda isgaarsiinta golis Telecom C/raxmaan C/laahi Jaamac Dayax ayaa kalmad uu ka jeediyay munaasbada ku sheegay in maanlintan ay kamid tahay maalmaha qiimaha u leh shirkadda Golis islamarkaana ay had iyo jeer kula faraxdo hal goob wariyayaasha.
Mudane Dayax ayaa ku dheeraaday adeegyada qiimaha leh ee shirkaddu usoo bandhigaysay shirkaddu macaamiisheeda mudadii ay ka hawlgalaysay Puntland ee guud ahaan dalka.
Sidoo kale shirkadda Golis ayaa garoonka kubadda cagta ee magaaladda Boosaaso gaysay koob qurux badan oo loo dhigay ciyaar loo qabtay xuska maalinta saxaafadda Soomaaliyeed oo ay kuwada ciyaarayeen koox wariyayaasha ah iyo koox kale oo uu hogaaminayay gudoomiyaha Sportga gobalka Bari ayna kujireen rug cadaayo ciyaareed.
Shirkadda Golis ayaana ugu dambayn ku wareejisay koobkii kooxdii uu hogaaminayay Gudoomiyaha Sportga gobalka Bari oo ka adkaatay kooxdii warayayaasha.
Si kastaba ha ahaatee kaalinta ay ka qaadatay shirkadda Isgaarsiinta Golis xuska maalinta saxaafadda Soomaaliyeed ayaa ahayd mid kudayasho mudan waxanan la ilaawi Karin sida ay u garab taagan tahay had iyo jeer saxaafadda iyo saxafiyiinta